ပရီးမီးယားလိဂ်ဒိုင်တွေက မျက်နှာကြီးရာ ဟင်းဖတ်ပါနေကြလား??? – Sports A2Z
ပွဲမစခင်ကတော့ ဘယ်သူမှ ဆွစ်ဇာလန်အသင်းက ပြင်သစ်နဲ့ သရေကစားခဲ့သလို စပိန်ကို သရေကစားနိုင်မယ်လို့ မထင်ခဲ့ကြပါဘူး။ ဆွစ်တို့ကတော့ ပထမပိုင်းမှာ တိုက်စစ်မှူး ဘရီးလ် အမ်ဘိုလို ရဲ့ ဒဏ်ရာကြောင့် နစ်နာခဲ့ရသလို ဒုတိယပိုင်းမှာလည်း ဖရွိုင်လာ အနီကတ်ပြခံလိုက်ရတာက အတော်နစ်နာခဲ့ရပါတယ်။
ပွဲချိန် ၇၇ မိနစ်အရောက်မှာတော့ စပိန်တိုက်စစ်မှူး ဂျရတ် မိုရီနိုအပေါ် ရီမို ဖရွိုင်လာ ဖျက်ထုတ်တာ ကြမ်းလွန်းတယ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ ကွင်းလယ်ဒိုင် မိုက်ကယ် အိုလီဗာက ဆွစ်ဇာလန်ကွင်းလယ်လူကို အံ့အားသင့်စရာ တိုက်ရိုက်အနီကတ်ကို ပြသခဲ့ပါတယ်။ အလွန်ဆုံး အဝါကတ်ပဲ ပြသသင့်တယ်လို့ ကြည့်ရှုသူတွေ ထင်နေကြတဲ့အချိန်မှာပါ။
တွစ်တာပေါ်မှာလည်း ဘောလုံးပရိသတ်တွေက မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပြီး တစ်ယောက်က “အဲ့ဒါသာ အနီကတ်ဆိုရင် အဝတ်တွေထုပ်ပြီးသာ အိမ်ပြန်တော့။ ပွဲပြီးပြီ” လို့ ရေးခဲ့သလို နောက်တစ်ယောက်ကလည်း “တိုက်ရိုက်အနီကတ် ပြဖို့မှမလိုတာ။ အဝါကတ်လောက်ပဲ ဖြစ်သင့်တယ်။ ဒါပေမယ့် အင်္ဂလန် ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ ဒိုင်နဲ့ VAR အဖွဲ့ဝင်တွေဆီက တခြားမျှော်လင့်လို့မှ မရတာ” ဆိုပြီး ဝေဖန်ခဲ့ကြတာပါ။
ယူရိုလို ပြိုင်ပွဲမျိုးမှာ ဒိုင်လုပ်ရတဲ့ အဆင့်အတန်းဟာ တကယ်ချီးကျူးစရာဆိုပေမယ့် ဒီထဲမှာတော့ အင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိဂ် ဒိုင်တွေဖြစ်တဲ့ ကွင်းလယ်ဒိုင် မိုက်ကယ် အိုလီဗာနဲ့ VAR ဒိုင် ခရစ္စ ကာဗန်းနားတို့တော့ ပါဝင်ခဲ့ကြမယ်တော့ မထင်ပါဘူး။ ဥရောပထိပ်တန်းအဆင့်ပြိုင်ပွဲမှာ နာမည်ကြီးလိဂ်ရဲ့ ဒိုင်အရည်အသွေးကို တကူးတက ပြသခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ နောက်ခံလူ ရော့ဘ် ဟိုးလ်ဒင်းကလည်း “အနီကတ်တဲ့လား? ဘယ်သူမှ နောက်ထပ် မဖျက်ထုတ်နဲ့တော့”ဆိုပြီး အင်စတာဂရမ်မှာ တင်သွားခဲ့ပါသေးတယ်။ ဂယ်ရီ လိုင်နီကာကလည်း “ဘာမှမဟုတ်တဲ့ဟာအတွက် အနီကတ်လာပြန်ပြီလား” လို့ တွစ်တာမှာတင်သွားခဲ့ပြီး ဒိုင်တွေရဲ့ အရည်အသွေးကို မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။
ITV မှာ ပူးတွဲဝေဖန်သူဖြစ်တဲ့ လီ ဒစ်ဆန်ကလည်း “ဒါက ကျွန်တော့်အတွက်တော့ အနီကတ်မဟုတ်ဘူးဗျ။ ဒီကောင်လေး တော်တော်ကို ကံမကောင်းတာ”လို့ ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ ဖျက်ထုတ်မှုအပေါ် VAR နဲ့ ပြန်လည်စစ်ဆေးတာလည်း အင်မတန် မြန်လွန်းခဲ့ပြီး စပိန်ကို ကမ္ဘာတဝှမ်းက ဘောလုံးပရိသတ်တွေရှေ့မှာတင် ပေါ်တင် ဖေးမပေးခဲ့ပါသေးတယ်။
ဒီလိုပြိုင်ပွဲကြီးမှာ အခုမှဆိုပေမယ့် မိုက်ကယ်အိုလီဗာတို့ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာတော့ အပတ်စဉ် ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အရာတွေပဲဖြစ်ပြီး တစ်ချိန်က မန်ယူနောက်ခံလူဟောင်းကြီး ရီယို ဖာဒီနန်ပြောခဲ့တဲ့ လျှောထိုးဖျက်ထုတ်ရင် တိုက်ရိုက်အနီကတ်ပြရမယ်ဆိုတဲ့ မှတ်ချက်ကို ပြန်တွေးမိလိုက်ပါတယ်။ မိုက်ကယ်အိုလီဗာတို့က ဖာဒီနန်ရဲ့ ပရိသတ်တွေများလားဆိုတာတော့………….။
ပြဲမစခင္ကေတာ့ ဘယ္သူမွ ဆြစ္ဇာလန္အသင္းက ျပင္သစ္နဲ႔ သေရကစားခဲ့သလို စပိန္ကို သေရကစားႏိုင္မယ္လို႔ မထင္ခဲ့ၾကပါဘူး။ ဆြစ္တို႔ကေတာ့ ပထမပိုင္းမွာ တိုက္စစ္မႉး ဘရီးလ္ အမ္ဘိုလို ရဲ႕ ဒဏ္ရာေၾကာင့္ နစ္နာခဲ့ရသလို ဒုတိယပိုင္းမွာလည္း ဖ႐ြိဳင္လာ အနီကတ္ျပခံလိုက္ရတာက အေတာ္နစ္နာခဲ့ရပါတယ္။
ပြဲခ်ိန္ ၇၇ မိနစ္အေရာက္မွာေတာ့ စပိန္တိုက္စစ္မႉး ဂ်ရတ္ မိုရီႏိုအေပၚ ရီမို ဖ႐ြိဳင္လာ ဖ်က္ထုတ္တာ ၾကမ္းလြန္းတယ္ဆိုတဲ့သေဘာနဲ႔ ကြင္းလယ္ဒိုင္ မိုက္ကယ္ အိုလီဗာက ဆြစ္ဇာလန္ကြင္းလယ္လူကို အံ့အားသင့္စရာ တိုက္႐ိုက္အနီကတ္ကို ျပသခဲ့ပါတယ္။ အလြန္ဆုံး အဝါကတ္ပဲ ျပသသင့္တယ္လို႔ ၾကည့္ရႈသူေတြ ထင္ေနၾကတဲ့အခ်ိန္မွာပါ။
တြစ္တာေပၚမွာလည္း ေဘာလုံးပရိသတ္ေတြက ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ၿပီး တစ္ေယာက္က “အဲ့ဒါသာ အနီကတ္ဆိုရင္ အဝတ္ေတြထုပ္ၿပီးသာ အိမ္ျပန္ေတာ့။ ပြဲၿပီးၿပီ” လို႔ ေရးခဲ့သလို ေနာက္တစ္ေယာက္ကလည္း “တိုက္႐ိုက္အနီကတ္ ျပဖို႔မွမလိုတာ။ အဝါကတ္ေလာက္ပဲ ျဖစ္သင့္တယ္။ ဒါေပမယ့္ အဂၤလန္ ပရီးမီးယားလိဂ္ရဲ႕ ဒိုင္နဲ႔ VAR အဖြဲ႕ဝင္ေတြဆီက တျခားေမွ်ာ္လင့္လို႔မွ မရတာ” ဆိုၿပီး ေဝဖန္ခဲ့ၾကတာပါ။
ယူ႐ိုလို ၿပိဳင္ပြဲမ်ိဳးမွာ ဒိုင္လုပ္ရတဲ့ အဆင့္အတန္းဟာ တကယ္ခ်ီးက်ဴးစရာဆိုေပမယ့္ ဒီထဲမွာေတာ့ အဂၤလန္ပရီးမီးယားလိဂ္ ဒိုင္ေတြျဖစ္တဲ့ ကြင္းလယ္ဒိုင္ မိုက္ကယ္ အိုလီဗာနဲ႔ VAR ဒိုင္ ခရစၥ ကာဗန္းနားတို႔ေတာ့ ပါဝင္ခဲ့ၾကမယ္ေတာ့ မထင္ပါဘူး။ ဥေရာပထိပ္တန္းအဆင့္ၿပိဳင္ပြဲမွာ နာမည္ႀကီးလိဂ္ရဲ႕ ဒိုင္အရည္အေသြးကို တကူးတက ျပသခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
အာဆင္နယ္အသင္းရဲ႕ ေနာက္ခံလူ ေရာ့ဘ္ ဟိုးလ္ဒင္းကလည္း “အနီကတ္တဲ့လား? ဘယ္သူမွ ေနာက္ထပ္ မဖ်က္ထုတ္နဲ႔ေတာ့”ဆိုၿပီး အင္စတာဂရမ္မွာ တင္သြားခဲ့ပါေသးတယ္။ ဂယ္ရီ လိုင္နီကာကလည္း “ဘာမွမဟုတ္တဲ့ဟာအတြက္ အနီကတ္လာျပန္ၿပီလား” လို႔ တြစ္တာမွာတင္သြားခဲ့ၿပီး ဒိုင္ေတြရဲ႕ အရည္အေသြးကို ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ပါတယ္။
ITV မွာ ပူးတြဲေဝဖန္သူျဖစ္တဲ့ လီ ဒစ္ဆန္ကလည္း “ဒါက ကြၽန္ေတာ့္အတြက္ေတာ့ အနီကတ္မဟုတ္ဘူးဗ်။ ဒီေကာင္ေလး ေတာ္ေတာ္ကို ကံမေကာင္းတာ”လို႔ ေျပာသြားခဲ့ပါတယ္။ ဖ်က္ထုတ္မႈအေပၚ VAR နဲ႔ ျပန္လည္စစ္ေဆးတာလည္း အင္မတန္ ျမန္လြန္းခဲ့ၿပီး စပိန္ကို ကမာၻတဝွမ္းက ေဘာလုံးပရိသတ္ေတြေရွ႕မွာတင္ ေပၚတင္ ေဖးမေပးခဲ့ပါေသးတယ္။
ဒီလိုၿပိဳင္ပြဲႀကီးမွာ အခုမွဆိုေပမယ့္ မိုက္ကယ္အိုလီဗာတို႔ ပရီးမီးယားလိဂ္မွာေတာ့ အပတ္စဥ္ ႀကဳံေတြ႕ေနရတဲ့ အရာေတြပဲျဖစ္ၿပီး တစ္ခ်ိန္က မန္ယူေနာက္ခံလူေဟာင္းႀကီး ရီယို ဖာဒီနန္ေျပာခဲ့တဲ့ ေလွ်ာထိုးဖ်က္ထုတ္ရင္ တိုက္႐ိုက္အနီကတ္ျပရမယ္ဆိုတဲ့ မွတ္ခ်က္ကို ျပန္ေတြးမိလိုက္ပါတယ္။ မိုက္ကယ္အိုလီဗာတို႔က ဖာဒီနန္ရဲ႕ ပရိသတ္ေတြမ်ားလားဆိုတာေတာ့………….။